चितवनमा कोरोना संक्रमितले बाँडेका थिए १२ परिवारलाई चकलेट – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ८ गते १२:५४
चितवनमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र पारिएको छ। राप्ती नगरपालिका-८ का अध्यक्ष बुद्धिराज थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर नै खोजी सुरु गरिएको हो।
अहिलेसम्म कार्यदलले कोरोना संक्रमित ४८ जनासँग सम्पर्क भएको खुलाएको छ। कार्यदलले दुई दिनसम्म तयार पारेको रिपोर्टअनुसार काठमाडौंबाट चितवन आएर मिठाइ बाँड्नेदेखि प्रत्यक्ष हात मिलाउनेसम्मका व्यक्तिको सूची तयार पारेको छ।
‘संक्रमित व्यक्तिसंग प्रत्यक्ष उठबस गरेका १४ जना र १२ घरका ३० जनालाई चकलेट बाँडेको जानकारीमा आयो। राप्तीका चारवटा पसलबाट उनीहरूले सामान किनेको खुलेको छ,’ कार्यदलका संयोजक बुद्धिराज थपलियाले भने, ‘तत्काल नौजनालाई कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज नै उहाँहररूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्छौं।’
यसअघि शनिबार संक्रमित व्यक्तिका परिवारका आठजनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूको नतिजा नेगेटिभ आएको थियो। आइतबार पिसिआर गर्न जिल्लाबाट स्वास्थ्यकर्मी बोलाइएको थपलियाले जानकारी दिए। एम्बुलेन्स चालक, सहचालकसहित अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा १० जना छन्।
कार्यदलको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा आमाछोरा नै बेलायतबाट कतार एयरवेजमार्फत् हङकङ हुँदै गत चैत ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका थिए। त्यसपछि हङकङमा बस्दै आएका माहिला छोरासँग काठमाडौंमा भेट भएको खुलेको छ। कोराना संक्रमित २७ वर्षीय (कान्छा छोरा) चार वर्षदेखि बेलायत बस्दै आएका थिए। उनीहरू दुवै स्थायी बसोबास अनुमतिप्राप्त हुन्।
माहिला छोरा हङकङमा बस्दै आए पनि उनीहरूको भेट भने काठमाडौंमै भएको अध्यक्ष थपलियाले बताए। काठमाडौंको कुन होटलमा बसेको भन्ने खुल्न सकेको छैन।
दुई दिन काठमाडौं बसेर उनीहरू तीनैजना चैत ५ गते माइक्रोबसमा चितवन आएको बताइएको छ। राप्तीको सिमलटाँडीबाट उनीहरूले घरसम्म जान (तीन किलोमिटर दुरी) टेम्पो प्रयोग गरेको खुलेको छ। उनीहरूले प्रयोग गरेको टेम्पो र माइक्रोबस पत्ता लागेको छैन। माहिला छोरामा भने कोरानो संक्रमण देखिएको छैन। शनिबार पिसिआर गर्दा कोरोना देखिएको थिएन। तर, उनलाई पनि आइसोलेसनमा नै राखिएको छ। उनीहरूको ११ जनाको परिवार छ।
‘उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यहाँका मानिस खुल्न चाहिरहेका छैनन्,’ थपलियाले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा बुझ्दा संक्रमित ६३ वर्षीया आमा घरबाट बाहिर ननिस्केको पाइएको छ। छोरा भने पर्सा, वीरेन्द्रनगर र सिमलटाँडी गएको खुलेको छ।’
संक्रमित व्यक्ति भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा भएका कारण थप विवरण लिन कठिन भएको थपलियाले बताए।
राप्तीका चारवटा पसलमा सामान किन्न जाने गरेको उनले बताए। थप विवरण स्थानीयले पनि लुकाएको थपलियाको भनाइ छ। अन्य विवरण संकलनको तयारीमा रहेको उनले बताए। उनीहरूसँग कतार एयरवेजमार्फत् नेपाल आएका व्यक्तिहरूको विवरण पनि सरकारले संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए।
राप्ती नगरपालिका-८ का उनीहरू सुरुमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। त्यसपछि वैशाख ३ गते आरडिटी गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि भरतपुर र काठमाडौंमा पिसिआर गरी शुक्रबार कोरोना भएको पुष्टि गरिएको थियो। सुरुमा उनीहरूले आफूहरू स्वस्थ रहेको भन्दै आनाकानी गरेका थिए। प्रशासनको दबाबमा उनीहरूले पिसिआर गर्न तयार भएको बुझिएको छ।
संक्रमितको अवस्था सामान्य, इन्टरनेट र सिसिटिभीबाट निगरानी
भरतपुर अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूको व्यवस्थापन आइसोलेसन क्याबिनमा इन्टरनेट र सिसिटिभी मनिटरिङमार्फत् भइरहेको भन्दै अन्य बिरामीले निर्धक्क भएर सेवा लिनसक्ने जनाएका छन्।
अस्पतालका अन्य सेवा सामान्य रहेको उनले बताएका छन्। विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमितहररू राप्ति नगरपालिकाका ६५ वर्षीया महिला र २७ वर्षीय पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ।
डा. तिवारीका अनुसार उपचार सेवा व्यवस्थित बनाउन अस्पतालको ए ब्लकको भुइँतला सिल गरेर आवश्यक उपकरण जडान गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ।